Homeसमाचारचलचित्र निर्माण गर्दै चर्चित नायिका आँचल शर्मा
November 16, 2020 admin समाचार 9814
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुन्द’रीहरु विबाह लग’त्तै चलचित्र क्षेत्रबाट पला’यत हुँदै आएको परिप्रे’क्षमा नायिका आचल शर्मा भने विबा’हपछि पनि जम्ने संकेत देखा’एकी छिन् ।
विबाह लग’त्तै कोरोना कहर सुरुभएपछि चल’चित्रमा काम गर्ने वाता’वरण नभए पनि म्यूजिक भिडियोमा औ’धी ब्यस्त बन्दै गइरहेकी आँचलले चलचि’त्र निर्माण गर्ने तया’रीमा छिन् । आँचलले पति डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग मि’लेर चलचित्र नि’र्माण गर्न लागेकी हुन् ।
जसको निर्देश’क लो’कप्रिय निर्देशक मिलन चाम्सले गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । चलचित्रलाई विशे’ष बनाउने तया’रीमा रहेका आँचल र उदिपको फिल्म अघि मिलनले भने अन्य ३ चलचित्रका लागि सा’इन गरिसके’को बताइन्छ । Osnepal बाट
के हुँदै’छ लमजुङमा २४ घ’ण्टामा ८६ पटक गयो भु’कम्प
May 20, 2021 admin समाचार 5334
लमजुङमा बुधवार देखि अनेकौं पटक भुक’म्पको ध’क्का महशुष गरिएको छ । विहिवार विहान पौने ६ वजेवाट भु’कम्प जान सुरु गरेको लमजुङमा अ’हिले पनि त्यो क्रम जारी छ । लमजुङको भुलभुलेलाई केन्द्रबिन्दु भएर साना ठूला गरी
June 11, 2021 admin समाचार 4678
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ? हेर्नुहोस्
November 29, 2020 admin समाचार 8919
स्थानीय बजा’रमा आज पहेंलो धातु’को मूल्य प्रतितोला रु ६०० ले ओ’रालो लागको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासङ्घका अनु’सार छापावाला सुन आज प्रति’तोला रु ९० हजार ७०० मा कारो’वार भएको छ । शुक्रबार छापावाला सुन
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229823)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227822)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226624)